AKHRISO: Magacyada, Dambiyada, iyo Gobollada ay kasoo jeedaan Dhalin yaro lagu xukumay Jaziiradda ….. | Wararka Jubbaland
AKHRISO: Magacyada, Dambiyada, iyo Gobollada ay kasoo jeedaan Dhalin yaro lagu xukumay Jaziiradda …..
Xabsiyadda ku yala Jaziiradda Scheles waxaa ku xiran dhalinyaro badan oo Soomali ah kuwaa oo lagu eedeynayo falal burcad badeednimo in lagu soo qabtay.
Halkaan Hoose ka Akhiso magacyada, Da’dooda iyo gobollada ay ka soo jeedaan, goobaha laga soo qabtay iyo xukunnada lagu riday Dhalinyaradda ku xiran Scheles
Maalin Daa’uud Colaad 34 jir ku dhashay gobolka Banaadir laga soo qabtay badda Somalia ayna soo qabteen ciidamada bada Spain navy kanareous ship 28/03/2011 laguna eedaynayo burcad badeednimo laguna xukumay 10 sano.
Xassan Cabdi Cali 26 jir ku dhashay gobolka Mudug, Gaalkacyo laga doo qabtay xeebta Garacad 7 mayl soo qabteen ciidamada bada royal Marines navy RFA fort Victoria A389 13/01/2011, lagu eedaynayo burcad badeednimo lagu xukumay 12 sano.
Max’ed C/qaadir Max’ed 30 sano jir ku dhashay gobolka Mudug ayna soo qabteen ciidamada badda Nederland warship Rotterdam L800. 13/08/2012 lagasoo qabtay xeebta Qandala 4 meyl lagu eedaynayo burcad badeednimo lagu xukumay 12 sano.
Max’ed Jaamac Cali 24 sano jir ku dhashay gobolka Bari, Boosaaso ays oo qabteen ciidamada badda Nederlands warship Rotterdam L800 13/08/2012 lagana soo qabtay xeebta Qandala 4 meyl lagu eedaynayo burcad badeednimo lagu xukumay 12 sano
C/shakuur Yaxye Khayre 33 ku dhashay gobolka Banaadir lagana soo qabtay xeebta Baraawe 11 meyl ayna soo qabteen ciidamada badda ee Denmark Albasna navy 10/11/2013 lagu eedaynayo burcad badeednimo kuna xukuman 14 sano.
Xassan Tahliil Axmed 23 jir ku dhashay gobolka Mudug Xarardheere, lagana soo qabtay xeebta Baraawe 11 mayl ayna soo qabteen ciidamada badda Denmark Albasna navy 10/11/2013 lagu eedaynayo burcad badeednimo lagu xukumay 14 sano
C/llaahi Shariif Ibrahim 27 sano jir ku dhashay gobolka Banaadir lagana soo qabtay xeebta Qandala 4 meyl ayna soo qabteen ciidamada bada Nederland warship Rotterdam L800 13/08/2012 lagu eedaynayo burcad badeednimo lagu xukumay 12 sano.
C/raxmaan Nuur Rooble 27 jir ku dhashay gobolka Banaadir lagana soo qabtay xeebta Qandala 4 mayl ayna soo qabteen ciidamada badda Nederland warship Rotterdam L800 13/08/2012 lagu eedaynayo burcad badeednimo lagu xukumay 12 sano.
Sahal Cartan Barre 38 sano jir ku dhashay gobolka Bari Boosaaso lagana soo qabtay xeebta Qandala 4 meyl ayna soo qabteen ciidamada badda Nederland warship Rotterdam L800 13/08/2012 lagu eedaynayo burcad badeesnimo kuna xukuman 12 sano.
Aadan C/llaahi Bariise 22 jir ku dhashay gobolka Banaadir lagana soo qabtay xeebta Baraawe 11 mayl aynasoo qabteen ciidamada bada Denmark navy albasna 10/11/2013 lagu eedaynayo burcad badeednimo laguna xukumay 14 sano.
Faarax C/llaahi Cali 19 jir ku dhashay gobolka Galgaduud, Cadaado laga soo qabtay xeebta Baraawe 11 mayl ayna soo qabteen ciidamada bada Denmark navy albasna 10/11/2013 lagu eedaynayo burcad badeednimo laguna xukumay 14 sano.
Xassan Siyaar Faarax 21 jir ku dhashay gobolka Banaadir lagana soo qabtay xeebta Baraawe 11 mayl ayna soo qabteen ciidamada bada Denmark navy albasna 10/11/2013 lagu eedaynayo burcad badeednimo laguna xukumay 14 sano.
Max’ed Bashiir Max’ed 25 jir ku dhashay gobolka Mudug, Xarardheer laga soo qabtay xeebta Baraawe 11 mayl ayna soo qabteen ciidamada Badda Denmark navy albasna 10/11/2013 laguna eedaynayo burcad badeednimo laguna xukumay 14 sano.
C/khader C/salaan Shiikh Cabdi 21 jir ku dhashay gobolka Sool, Laasacaanood lagana soo qabtay xeebta Baraawe 11 mayl ayna soo qabteen ciidamada badda Denmark navy albasna 10/11/2013 lagu eedaynayo burcad badeednimo laguna xukumay 14 sano.
Max’ed C/llaahi Max’ed 18 jir ku dhashay gobolka Banaadir lagana soo qabtay xeebta Baraawe 11 mayl ayna soo qabteen ciidamada badda Denmark navy albasna 10/11/2013 lagu eedaynayo burcad badeednimo laguna xukumay 14 sano.